Win Mya Swe's Page - Myanmar Network
Win Mya Swe
Win Mya Swe's Likes
Win Mya Swe's Friends
Win Mya Swe's Discussions
စီကုံးရေးဖြေရသော စာမေးပွဲများ (Essay Exams) ဖြေဆိုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက် ၁၀ ခု
Started this discussion. Last reply by Nectar Mon Jan 22, 2013.6Replies 41 Likes
သင်၏ အရေးစွမ်းရည်ကို အသုံးချခွင့်ပေးတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါ။ သမိုင်း၊ အနုပညာ၊ စီးပွားရေး၊ စက်မှု၊ စိတ်ပညာနှင့် ဇီဝဗေဒအစရှိသော အသွင်ကွဲပြားသည့် ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးတို့တွင် စီကုံးရေး ဖြေရသော…Continue
How to writeaspeech (မိန့်ခွန်းရေးသားနည်း)
Started this discussion. Last reply by Zaw Win Htet Jan 20, 2013. 16 Replies 34 Likes
မိန့်ခွန်းရေးတာနဲ့ စာစီစာကုံး (အက်ဆေး) ရေးတာ တူညီတာတွေ အများကြီးဘဲ။ မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောရတဲ့ စာစီစာကုံးတစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် မိန့်ခွန်းဆိုတာ နှုတ်နဲ့ ပြောတာကို နားထောင်ရမှာ…Continue
မှားတတ်တဲ့ ကော်မာအမှား ၃ခု
Started this discussion. Last reply by nilartun Dec 8, 2012.5Replies 25 Likes
အောက်ဖော်ပြပါ နမူနာ ၀ါကျ ၃ကြောင်းမှာ ကော်မာကို မလိုအပ်ဘဲ သုံးထားတာတွေ၊ ကော်မာသုံးရမယ့် နေရာမှာ မသုံးမိတာတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။၁။ " The giant, blue eyeball that washed up onaFlorida beach likely…Continue
Started this discussion. Last reply by aungzawoo Oct 19, 2015. 20 Replies 37 Likes
Win Mya Swe has not received any gifts yet
Win Mya Swe's Page